Egwuregwu kacha mma ị ga-egwu na Zoom na ezinụlọ na ndị enyi 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
N'oge a nke na-elekọta mmadụ distancing ruru ka Covid-19 Anyị niile na-eji teknụzụ enyere iji mepụta nzukọ vidiyo na nzukọ ịntanetị, dị ka Gbado anyaAgbanyeghị, ọkpụkpọ vidiyo nwekwara ike bụrụ ohere iji nwee anụrị, ịhazi nzukọ egwuregwu n'ịntanetị na ndị enyi na ezinụlọ.
Ya mere, anyị na-enye gị nhọrọ nke egwuregwu dị mfe igwu egwu. Gbado anya (ma ọ bụ na Nzukọ ma ọ bụ ngwa vidiyo ọ bụla ọzọ), na-enweghị nbudata ngwanrọ ma ọ bụ ngwa, kama naanị site na ijikọ ndị enyi na ezinụlọ, na-eji ụfọdụ atụmatụ bara uru n'efu nke ikpo okwu na-enye ma na-ahapụ ohere maka okike gị na echiche gị, iji nye gị oge nke ezumike na ịchị ọchị. Za na-enweghị overlapping na-eme ka ihe niile ọbụna ihe na-atọ ụtọ, ndụmọdụ bụ họrọ ole na ole akara ụda eme ka botones.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Egwuregwu ọtụtụ egwuregwu kachasị mma
Oge ị nwere ike ịkekọrịta ihe ngosi na kọmputa gị, ịnwekwara ike ịnabata review dị mfe, na uru nke inwe ike ịgakwuru ọtụtụ mmadụ n'otu oge. Enwere ike ịmalite mmụọ nsọ site na asọmpi telivishọn dịka "Onye choro ibu nde mmadu" O "Ihe nketa" ma mee ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee otu egwuregwu. Ya mere, atụla ụjọ ịche echiche buru ibu ma mepụta ihe!
Enwere ike ịga n'ihu na -emepụta ajụjụ ajụjụ ahụ na akwụkwọ na mkpịsị edemede, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dijitalụ, Kahoot nwere ike bịa nyere gị aka. Kahoot ọ na-enye ohere, n’ezie, imepụta ihe ngosi nke ọtụtụ ajụjụ nhọrọ, nke onye ọ bụla na-ekerịta site na ihe nchọgharị weebụ ha ma jikwaa ndị nchịkwa niile mgbe a bịara ịtụ vootu na ịgụta ọtụtụ. Atụmatụ n'efu na-enye gị ohere ịkekọrịta ajụjụ Kahoot nwee ihe ruru mmadụ iri n’otu oge, jiri nhọrọ nke oge na akara aka.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Egwuregwu kachasị mma na ajụjụ (Android na iPhone)
Egwuregwu a na-ahụ ka otu egwuregwu abụọ na-asọ mpi na ntanetị ịntanetị juputara na okwu yana ebumnuche gị bụ ikpochapụ okwu ndị otu gị ngwa ngwa o kwere mee. Otu ọ bụla na-ahọpụta a "onye isi" onye nwere oru nke inye ndi ozo ya ihe ngosi ka ha chee otutu okwu dika o kwere mee: dika ima okwu "ụbọchị" ga-abu ihe enyemaka maka okwu ah u "oge" na site n'okwu "ọkụ". N’ụzọ doro anya, ka mkpụrụ okwu ole ị na-ede na akara ngosi ole na ole, ngwa ngwa mbadamba ga-ekpochapụ na ohere nke mmeri.
Huntchụ nta akụ
Nke a bụ egwuregwu dị egwu nke na-enyekwa ndị mmadụ ohere ibilite ma na-agagharị, yana ijikọ aka ọnụ ebe enwere ọtụtụ mmadụ gburugburu laptọọpụ ọ bụla ma ọ bụ kamera weebụ ọ bụla. O kwere omume ime ka ịchụ nta akụ dị ogologo ma sie ike ma ọ bụ dị mkpụmkpụ ma dịkwa mfe na ebumnuche nke ịnakọta ihe ụfọdụ ma ọ bụ ihe ndị na-ezute ụfọdụ njirisi, n'ụlọ niile. Iji mee ka asọmpi dị n'etiti ndị egwuregwu dị iche iche dị elu, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ isi ihe dịka ọsọ na okike nke ndị sonyere na nhọrọ nke ihe. Ezigbo keeplọ nwere ndepụta siri ike nke echiche dị mkpa iji bido.
Site na bọọdụ nke Gbado anya, achọtara na ngalaba ahụ share, ị nwere ike igwu ụdị nke a Akwụkwọ ọkọwa okwu: n'aka nke ya, onye ọ bụla sonyere na egwuregwu ahụ ga-eso ndị ọzọ kerịta bọọdụ nke ha wee bido ịdọrọ na ya. Nwere ike ịhọrọ ma hazie agba dị iche iche, nha nha na ọtụtụ ihe iji mee ka ịse gị pụrụ iche ma bụrụ eziokwu.
Onye izizi ga - eche ihe ha na - ese ga - enweta isi okwu!
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwere Nnọọ: dị ka anyị hụworo na mbụ maka chessN'okwu a kwa, ihe niile ị ga - eme bụ ịhazi ya, ịmepụta oghere maka kọmputa ka ọ bụrụ ahụmahụ na egwuregwu ga - ekekọrịta. Ga-achọ ndị ọrụ nchekwa ego abụọ ma ọ bụ karịa, otu maka otu ọ bụla. Gbado anya, ndị ga-ahụkwa na ọ dịghị ndị na-anwa ịghọ aghụghọ ule nakwa na azụmahịa ndị a dịpụrụ adịpụ n'etiti ndị egwuregwu na-arụ ọrụ.
Egwuregwu ahụ, doro anya, ga-ewere ọnọdụ na mbadamba nke otu egwuregwu ọ bụla na ngagharị nke pawns na iwu ụlọ na ụlọ nkwari akụ. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ akwụkwọ ozi, dị ka ihe a na-atụghị anya ya mi Ohere A ga-eme ha abụọ na akụkụ ụfọdụ nke egwuregwu ahụ agaghị arụ ọrụ ma ọlị, mana ihe dị mkpa bụ ka gị na ndị ọrụ nwee ọ andụ ma soro ezumike ahụ soro ndị ị hụrụ n'anya nọrọ "n'ebe dị anya".
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Egwuregwu bọọlụ na parlor n'ịntanetị: ihe egwu, ijiri ego na ndị ọzọ
Egwuregwu a chọrọ ka ndị egwuregwu niile nwee Wikipedia mepee na ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụrụ laptọọpụ, mbadamba ma ọ bụ ekwentị. Ndị egwuregwu niile kwesịrị inwe otu mmalite na njedebe peeji - onye na-aga site na nke ọzọ na obere oge bụ onye mmeri. Isi iwu bụ na ịnwere ike ịgagharị na akwụkwọ nkà ihe ọmụma site na ịpị ma ọ bụ ịpị njikọ ndị ahụ site na Wikipedia, yabụ ndị egwuregwu kwesịrị iche echiche nke ọma nke njikọ ha kpebiri iso.
Na egwuregwu a, pụrụ ichetụ n'echiche bụ ihe niile ... ihe ọ na-ewe iji nwere fun! Onye ọ bụla sonyere, n'aka nke ya, ga-anwa ime ka ndị ọzọ chee ihe, agwa, anụmanụ naanị mimandoli. Naanị njedebe bụ echiche gị! I nwekwara ike iche banyere ịtụgharị egwuregwu a ka ọ bụrụ nsụgharị. ihe nkiri, si otú a na-eitatingomi isi ihe nkiri sinima, ọbụnadị ọtụtụ okwu mejupụtara. N'okwu a, tupu ịmalite i imitateomi ihe nkiri ahụ, ọ dị mkpa igosi ọnụ ọgụgụ nke okwu mejupụtara aha ahụ wee… bido ihe ịma aka ahụ!
Chọpụta abụ ahụ
Egwuregwu ọzọ na-atọ ụtọ ịtụ aro Gbado anya es Chọpụta abụ ahụ, ụdị nke Sarabanda Ntaneti nke ga - akpata obi uto na mpi. Ihe dị mma ebe a bụ iji uru ọrụ egwu egwu nwere ike rụọ ọrụ site na ịpị akara ngosi share mgbe ahụ na-aga ngalaba Di elu ma hota isiokwu ahu Kekọrịta naanị ụda kọmputa. N'oge ahụ, a na-ekenye onye ọ bụla ọzọ na kọmputa nke onye ọ bụla ahọrọ ịhọrọ abụ ahụ ịkọ nkọ. Ọ ga-ezuru, ya mere, ịmalite abụ na ... chere ka onye mbụ nwee ike inye azịza ziri ezi na ihe ịma aka mega nke ihe ọmụma na mmeghachi omume egwu.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe dịtụ jụụ, ndị chess ha bụ egwuregwu dị mfe ịtụfu Gbado anya. O doro anya, ị nwere ike igwu cheesi na ntanetị ma ọ bụ site n'ụdị ozi ọ bụla, mana iwepụta oge iji soro onye ị hụrụ n'anya nọ n'akụkụ chessboard mee ka ị dịkwuo nso. Naanị ị ga-echeta ịkwaga iberibe ahụ na mbadamba abụọ ahụ ka ị nwee mmalite nke egwuregwu a na-achịkwa. Ma maka ndị kachasị nwee mmetụta, ọ ga-ekwe omume igwu egwu ruo ọtụtụ ụbọchị: hapụ nhazi nke mbadamba ya na mpempe niile na ebe. Nke a na-enyekwa gị oge iji hazie atụmatụ mmeri!
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Chess na ụmụ nwanyị n'efu na gam akporo, iPhone na ịntanetị
Ibugo Okpo - Na Na Na
Amụrụ dị ka mmega ahụ arụ ọrụ maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, The ije ọ dị ugbu a nye onye ọ bụla chọrọ ịnwale ya n'efu.
Onye na-akọ akụkọ na-eduga ndị ọzọ, na-ekewa ya n'òtù asọmpi, na-ekerịta ihe nkiri slide na-enye ohere họrọ njem nke gị- Ikwesiri ime nkpebi otu site na ikpo okwu izizi nke ị choro iji hu na ndi otu gi na anwu n’abali ma ghara imebi ihe.
Gwuo Njirimara Na mkparịta ụka vidiyo, ịchọrọ ụfọdụ isi maka ịrụ ọrụ yana ọtụtụ ọkụ ka vidiyo ahụ abụghị ọka. Ebumnuche nke egwuregwu a bụ ịrịọ onye na-eme ihe nkiri ahụ ka ọ chepụta echiche ma tinye ya ka ndị otu ya nwee ike ịkọ nkọ. Ndị na-esonye na vidiyo vidiyo nwere ike ịlele, oge egwu, ma hụ na aghụghọ adịghị. Ọ bụrụ na ndị niile sonyere nwere otu kaadị Njirimara n'ụlọ ọbụna ka mma.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Gwuo Bingo, akara akara na mmịpụta nọmba
N'isiokwu ndị ọzọ anyị hụkwara:
Egwuregwu 10 maka mmadụ abụọ igwu egwu n'otu PC ma ọ bụ na ịntanetị (HTML5)
Egwuregwu 20 n'efu na-egwu egwuregwu n'ịntanetị ma kpọọ ndị enyi